Luulyo 2012 | RayHaber | raillynews
Bisha: July 2012
Shaqaalaha Hazelnut ee jidka tareenka ayaa la yaabay
Shaqaalaha xilliyeed ee ka imaan doona Sakarya gobollada Bariga iyo Koonfur-galbeed si ay u soo ururiyaan hazelnuts ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan tareenka hazelnut. Sanadkan, shaqaalaha waxaa sabab u ah wadada tareenka ee xiran sababtoo ah Wadada Wadada Xawaare Sare ee Eskişehir-Istanbul (YHT). [More ...]
Pinarbaşı Cable-Line Cable waa gaabis
P linenarbaşı-Aytepe fiilada gawaarida fiilada, oo la sameeyay oo la adeegsaday İlhami ORTEKİN, duqa muddadi ugu dambeysay, ayaa looga haray inuu qudhmo. Degmada Aydın waxay ka sameysay malaayiin lacag ah agabyadeeda iyo [More ...]
Sakarya Metropolitan Municipality 4 Nidaamka Wadooyinka Tareen Istaag Joojinta Shaqada Dhammaystiray
Dowlada Hoose ee Magaaladda ayaa fulisay qandaraaska dhismaha xarunta 4 ee nidaamka tareenka magaalada. Shirkadda 1 waxay soo gudbisay hindisada. Natiijada hindisada waxaa loo sheegi doonaa dadweynaha kadib dib u eegista guddiga. Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya, tareenka magaalada [More ...]
Khadka Tareenka ee Iskuday Arbacada
Duqa magaalada Samsun Arbacada Hüseyin Dündar ayaa sheegay in joojinta qeybta harsan ee kilomitir ee 3 kilomitir ee tareenka magaalada loo arko inay ku haboon tahay Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, Binali Yıldırım. Dawlada Hoose ee Arbacada [More ...]
GE Gaadiidka si loo soo saaro mashiinka gawaarida ee Kazakhstan
Gaadiidka GE; 90 waxay heshiis hal milyan oo doollar ah la saxiixatay shirkadaha Kazakhstan Railway (KTZ) iyo shirkadaha TransMashDiesel. Sida ku xusan heshiiska, GE ayaa ka dhisi doonta warshad soo saar mishiinka naaftada ah oo ku taal magaalada Astana ee caasimada Kazakhstan. Sida ku xusan heshiiska; shirkadaha isla [More ...]
Nukhet Işıkoğlu: Tareenka isbedelaya aduunka
Golobalaasation waa fikrad aan si joogto ah u maqalnay sanadihii ugu dambeeyay. Waxaa lagu qeexay kobaca is-dhexgalka bulshada, is-dhexgalka iyo midnimada marka loo eego dhaqaalaha, bulshada, farsamada, dhaqanka iyo isu-dheellitirka deegaanka. Isla mar ahaantaana, dhaqaalaha, bulshada iyo [More ...]
Foosto Fudud oo Khadka Tareenka ah ee La Xiriira
Maamulka Arizona wuxuu ansaxiyay qorshooyinka loogu tala galay fidinta galbeedka ee wadada tareenka fudud ee Phoenix Valley. 17.7 79 waa bartamaha magaalada Phoenix oo leh xero cusub oo km ah. Isgoyska wadada iyo isku xirka wadada I-10 West [More ...]
Siemens oo soo bandhigtay luuqadaha eurorunner ee ugu dambeeyay
SIEMENS ER20 wuxuu ku dhawaaqayaa dhamaadka soosaarka Eurorunner naaftada naaftada korantada. Amarkii ugu dambeeyay ee Siemens wuxuu gaadhay Metrans Czech Republic iyo Adria Transport Slovenia. Isku soo wada duuboo, xawaaraha "181 ER20s" waxaa amar ka heley hawlwadeenka 22. this [More ...]
Gaadiidka tareenka ayaa yimid, asbuucan asbuucan
Waxaa loo yaqaanaa Khadka T1, laakiin waxaa caan ku ah loo yaqaan 'Sculpture-Garage Tram. Jilicsanaanta iyo keenida taraamka oo sameyn doona fargal joogto ah oo u dhexeeya Heykel-İnönü Street-Uluyol-Kent Square-İpekiş-Stadium-Altıparmak-Heykel waa la dhameystirey. Shalay de Tram [More ...]
Dib u eegida labaad ee Bursaray Kestel marxaladda: Target Ankara Yolu
Bursaray waxay leedahay labo dhibcood dhanka galbeedka Bursa. Wadada loo marayo Izmir, Jaamacadda Uludağ waxay gashay Görükle Campus. Wadada Mudanya, waxay kusii kordhisay Emek. Wadada Bari waxay ku taal Wadada Ankara [More ...]
Bandhigga gaadiidka tareenka Ramadini Koç
La Littorina Mototren Mototren, wuxuu ka kooban yahay gaari keliya oo ku raaci kara mashiinkiisa iyada oo aan loo baahnayn isgaarsiinta tareenka, maadaama ay leedahay matoor hore iyo gadaal iyo xamuulka darawalka. [More ...]
Shaqaalaha IZBAN waxay bilaabeen inay sameeyaan!
Gorgortanka wadajirka ah ee gorgortanka gorgortanka wadajirka ah ee shaqaalaha haweenka ah ee Ururka Ganacsiga Waddooyinka Tareenka, ragga ayaa bilaabay ficilka garka. Gabagabadii heshiiska gorgortanka wadajirka ah ee lala yeesho İZBAN kaasoo dhaliyay khilaaf [More ...]
Europorte si ay uga shaqeeyaan Bordeaux Rail Railways
Saraakiisha Dekadda Bordeaux waxay heshiis sanadle ah la saxeexdeen Eurotunnel kabista Europorte Socorail ee qandaraaska 8 ee howlaha dekedaha iyo kaabayaasha tareenka ee ka shaqeeya goobta dekada. Khadadka tareenka ee dekedaha Bassens iyo Le Verdon [More ...]
TRANSNET Freight Rail (TFR) waxay hindisada u soo saartaa 599 laydhka korontada
TRANSNET Freight Rail (TFR) waxay diyaarineysaa hindisooyin loogu talagalay 599 gawaarida korantada korantada cusub ee cusub ee loogu talagalay isticmaalka qaybta guud ee xamuulka. Qaybta hore ee '65' waxaa lagu bixin doonaa 2015 qaybta koowaad. 130 [More ...]